Umklamo Omnyama Wokumemezela I-ATEM Mini Pro ISO | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » I-Blackmagic Design Imemezela I-ATEM Mini Pro ISO entsha
I-Blackmagic Design Imemezela I-ATEM Mini Pro ISO entsha
IFremont, CA, e-USA - ngoLwesine, Julayi 30, 2020 - I-Blackmagic Design namuhla umemezele i-ATEM Mini Pro ISO, isishintshi esisha sokukhiqiza bukhoma esinezindleko eziphansi nenjini entsha yokurekhoda yokusakaza eyi-5 evumela konke okufakwayo kwevidiyo ukuthi kuqoshwe okuvumela ukukhiqizwa okubukhoma ukuthi kuhlelwe ngemuva komcimbi. Lokhu kuvumela abasebenzisi ukuthi bathole okuphakelayo okuhlanzekile kwakho konke okokufaka futhi basebenzise ukuhlela isoftware izici zamakhamera amaningi ukuhlela kamuva. I-ATEM Mini Pro ISO nayo iqopha wonke amafayela alalelwayo, ihluzo le-media pool nefayela leprojekthi le-DaVinci Resolve, ngakho-ke umkhiqizo obukhoma ungavulwa futhi uhlelwe ngokuchofoza okukodwa!
I-ATEM Mini Pro ISO iyatholakala ngokushesha kusuka I-Blackmagic Design abathengisi emhlabeni wonke nge-US $ 895.
Abashintshi be-ATEM Mini benza kube lula ukudala ukwenziwa kwamakhamera amaningi ngobuchwepheshe ekusakazeni bukhoma ku-YouTube nezethulo zebhizinisi ezintsha kusetshenziswa i-Skype noma i-Zoom. Mane uxhume i-ATEM Mini futhi amakhasimende angashintsha bukhoma phakathi kokufakwayo kwekhamera ephezulu yevidiyo engu-4 yezithombe ezingcono kakhulu. Noma xhuma ikhompyutha ngamaslayidi e-PowerPoint noma imidlalo yokududuza. Okwakhelwe ku-DVE kuvumela isithombe esijabulisayo kwimiphumela yesithombe, sikulungele ukuphawula.
Kunemiphumela eminingi yevidiyo nayo. Zonke izinhlobo ze-ATEM Mini zine-USB esebenza njengekhamera yewebhu ukuze amakhasimende akwazi ukusebenzisa noma iyiphi isoftware yokusakaza ngenkathi imodeli ye-ATEM Mini Pro ingeza ukusakaza bukhoma nokuqopha kuma diski e-USB. Kukhona futhi I-HDMI iphume kumaphrojektha. Okokufaka kombhobho kuvumela ikhwalithi ephezulu yedeskithophu kanye ne-lapel mics yezingxoxo nezethulo.
Ukuhlanganiswa kwe-ATEM Mini konke kudizayini eyodwa kufaka phakathi iphaneli yokulawula kanye nokuxhuma. Iphaneli langaphambili lifaka izinkinobho ezisebenziseka kalula zokukhetha imithombo, imiphumela yevidiyo nezinguquko. Kumodeli ye-ATEM Mini Pro amakhasimende futhi athola izinkinobho zokuqopha nokulawula ukusakaza kanye nezinkinobho zokukhetha ukuphuma okuvumela amakhasimende ukuthi ashintshe okukhipha ividiyo phakathi kwamakhamera, uhlelo kanye ne-multiview. Kwiphaneli engemuva kukhona I-HDMI ukuxhumana kwamakhamera noma amakhompyutha, okokufaka okungeziwe ngemakrofoni, i-USB ye-webcam ngaphandle kanye ne I-HDMI Ukukhishwa kwe- "aux" yevidiyo yohlelo.
Le modeli ingeza ukurekhodwa kwemifudlana yevidiyo efinyelela ku-5 ye-H.264 ngesikhathi sangempela. Lokho okuphakelayo okuhlanzekile kwakho konke okokufaka kanye nohlelo olubukhoma. Ifayela leprojekthi yeDaVinci Resolve nalo ligcinwa ukuze amakhasimende akwazi ukuvula umkhiqizo wabo bukhoma ukulungisa ukuhlela, ukushintsha amashothi, umsindo we-remix futhi engeza ukulungiswa kombala.
Imodeli ye-ATEM Mini Pro ISO ivumela amakhasimende ukuthi ahlele umcimbi wawo obukhoma ngoba ingarekhoda ukusakazwa kwamavidiyo ama-5, kufaka phakathi okuphakelayo okuhlanzekile kwakho konke okokufaka nokuqoshwa kohlelo, konke ngasikhathi sinye. Izithombe ze-Media pool ezisetshenzisiwe nazo zigcinwa namafayela evidiyo. Amafayela evidiyo afaka amathegi emethadatha afana ne-timecode evumelanisiwe nezinombolo zekhamera. Cabanga uhlela kabusha umbukiso wabo ngamabanga emibala emisha, imiphumela kanye nehluzo. Ngisho nemithombo yomsindo yonke irekhodiwe ukuze amakhasimende akwazi ukuxuba kabusha umsindo wawo ngobuchwepheshe.
Imodeli ye-ATEM Mini Pro ISO nayo ingagcina ifayili leprojekthi le-DaVinci Resolve, ngakho-ke ngokuchofoza okukodwa, amakhasimende angavula ukukhiqizwa kwawo bukhoma njengokuhlela ividiyo. Konke ukusikeka, ukuncibilika kanye nemifanekiso ye-pool pool izolayishwa. Lokhu kusho ukuthi amakhasimende angahle ahlele amaphuzu wokuhlela noma afake ngokuphelele isibhamu. IDaVinci Resolve Sync Bin ivumela amakhasimende ukuthi akhethe isibhamu esisha nge-multiview ngakho-ke kulula kakhulu ukusisebenzisa. Amakhasimende angaphinde axhumeke kumafayela wekhamera weBlackmagic RAW yokwengeza ukulungiswa kombala osezingeni eliphezulu nokuqedela kuwo I-Ultra HD.
Akukaze kube nesishintshi esisebenziseka kalula, njengoba amakhasimende emane acindezele noma yiziphi izinkinobho zokufaka ezinelebuli engu-1 kuye ku-4 kuphaneli engaphambili ukusika phakathi kwemithombo yevidiyo. Amakhasimende angakhetha phakathi kokusika noma imiphumela yokushintsha ngokukhetha izinkinobho zokusika noma ezenzakalelayo. Ngokungafani nokusika, inkinobho ezenzakalelayo itshela i-ATEM Mini ukuthi isebenzise umphumela wevidiyo lapho ishintsha okokufaka. Amakhasimende angakhetha kusuka kuzinguquko ezijabulisayo njengokuncibilika, noma imiphumela emangazayo efana nokucwilisa kumbala, ukukhama kwe-DVE ne-DVE Push. I-DVE ilungele isithombe emiphumeleni yezithombe futhi amakhasimende angabeka ngokushesha izikhundla zezithombe ezahlukahlukene.
Nge-4 ezimele I-HDMI okokufaka, amakhasimende angaxhuma kuze kufike kumakhamera wevidiyo aphezulu ama-4. Yonke imithombo yevidiyo izovumelaniswa kabusha kusishintshi uma isebenza kumazinga ahlukile wevidiyo ukuze amakhasimende angakhathazeki ngokuxhuma amadivayisi wevidiyo njengoba onke esebenza nje. Cabanga ukusebenzisa amandla amancane okukhanya kwamakhamera angcono ekukhiqizeni imidlalo yaseshashalazini, imishado, amakhonsathi esikole namavidiyo omculo.
Imodeli ye-ATEM Mini Pro inenjini yokusakaza ye-hardware yokusakaza bukhoma ngokuxhumeka kwayo kwe-ethernet. Lokho kusho ukuthi amakhasimende angasakaza bukhoma ku-YouTube, Facebook nakuTwitch ngekhwalithi engcono, ngaphandle kozimele abalahliwe futhi anezilungiselelo ezilula kakhulu. Vele ukhethe isevisi yokusakaza bese ufaka ukhiye wokusakaza. Kukhona ama-palettes ku-ATEM Software Control yokusethwa kokusakazwa, kanye nesimo sokusakaza naso sikhonjiswa ku-multiview. Isimo sokusakaza kulula ukusiqonda njengoba inkomba yesilinganiso sedatha ikhombisa isivinini se-inthanethi esidingekayo kubasebenzisi befomethi yevidiyo.
Imodeli ye-ATEM Mini Pro futhi isekela ukurekhodwa okuqondile kwedatha yabo yokusakaza kuma-disk flash disk. Lokho kusho ukuthi amakhasimende athola ukuqoshwa okude kakhulu kumafayela wevidiyo we-H.264 afanayo ngomsindo we-AAC amakhasimende asakaza kuwo, ngakho-ke amakhasimende angaqondisa ukulayishwa kunoma iyiphi isayithi lamavidiyo aku-inthanethi, njenge-YouTube neVimeo. I-ATEM Mini Pro isekela amadiski amaningi lapho isetshenziswa ngehabhu le-USB noma iBlackmagic MultiDock, ngakho-ke lapho idiski igcwalisa ukurekhoda ingaqhubekela kudiski yesibili yokurekhoda okungapheli. Izilungiselelo zokurekhoda nokukhethwa kwediski kusethwe ku-ATEM Software Control futhi kukhona ukubuka kwesimo kwerekhodi endaweni eyakhelwe ku-multiview.
Ukuqinisekisa ukuhambisana okuphelele, i-ATEM Mini ifaka ukuxhumeka kwe-USB okusebenza njengomthombo olula wekhamera yewebhu. Lokho kusho ukuthi amakhasimende angangena futhi asebenze ngokushesha nganoma iyiphi isoftware yevidiyo. Isoftware ikhohliswe ekucabangeni ukuthi i-ATEM Mini iyikhamera yewebhu ejwayelekile, kepha empeleni isishintshi sokukhiqiza bukhoma. Lokho kuqinisekisa ukuhambisana okugcwele nanoma iyiphi isoftware yevidiyo nangokucaca okuphelele kwekhwalithi ye-1080HD. I-ATEM Mini isebenza nesoftware nezinkundla ezifana ne-Open Broadcaster, i-XSplit Broadcaster, i-YouTube Live, i-Facebook Live, i-Skype, i-Zoom, i-Twitch, i-Periscope, i-Livestream, i-Wirecast nokuningi.
Ngayinye ye-4 I-HDMI okokufaka kufaka abaguquli babo bezindinganiso abazinikezele. Lokho kusho ukuthi i-ATEM Mini izoguqula ngokuzenzakalelayo imithombo engu-1080p, 1080i ne-720p ibe yividiyo ejwayelekile yoshintsho. The I-HDMI okukhiphayo kungukukhipha kweqiniso kwe- "aux" ukuze amakhasimende akwazi ukuhlanza ukushintsha ngakunye I-HDMI okokufaka noma uhlelo kulokhu kukhishwa. Uma abasebenzisi basebenzisa uhlelo / ukubuka kuqala kokushintsha, i I-HDMI ngaphandle kungakhethwa ukubuka kuqala, noma kwimodeli ye-ATEM Mini Pro, kungakhethwa ukubonisa i-multiview ephelele.
Uhlelo lokusebenza lwe-ATEM Software Control luvula amandla afihliwe we-ATEM Mini futhi luvumela ukufinyelela kuzo zonke izici ezikusishintshi. I-ATEM Software Control ifaka isikhombimsebenzisi esibonakalayo somsebenzisi esishintshayo esinamapharamitha wokwenza ukulungiswa okusheshayo. Yize amakhasimende ejwayele ukuxhuma nge-USB, uma amakhasimende exhuma esebenzisa i-Ethernet kungenzeka ukuthi abasebenzisi abaningi baxhume ku-ATEM Mini besebenzisa amakhophi ahlukile we-ATEM Software Control kumakhompyutha ahlukile.
Okwakhelwe "echibini lemidiya" kuvumela ukulayishwa kwehluzo ze-RGBA ezingafika kwezingu-20 zezihloko, amapuleti okuvula namalogo. Imidwebo ingalayishwa nge-ATEM Software Control noma ilandwe ngqo kusuka ku-Photoshop kusetshenziswa i-plug-in ye-ATEM Photoshop.
Emsebenzini wezethulo wezindaba noma we-on-set, i-ATEM Mini iphelele njengoba ine-ATEM Advanced Chroma Key kanye nokhiye ongaphezulu owehlayo. Amakhasimende angakwazi nokuyisebenzisela ukunqwabelanisa isihloko ngokwenza imidwebo enengemuva eliluhlaza noma oluhlaza okwesibhakabhaka futhi okhiye bayokhipha okuluhlaza futhi benze ingemuva libe sobala.
Lapho wenza imikhiqizo emikhulu ebukhoma enamakhamera amaningi, kuyasiza kakhulu ukubona yonke imithombo yabo yevidiyo ngasikhathi sinye kusiqaphi esisodwa. Imodeli ye-ATEM Mini Pro ifaka i-multiview esezingeni eliphezulu evumela amakhasimende ukuthi abone konke okokufaka kwamavidiyo ama-4, kanye nokubuka kuqala nohlelo okukodwa I-HDMI ithelevishini noma ukuqapha. Ukubukwa kwekhamera ngayinye kufaka izinkomba zethali ukuze amakhasimende azi lapho umthombo ngamunye usemoyeni, futhi ukubuka ngakunye kunamalebula angokwezifiso namamitha alalelwayo. Amakhasimende angabona futhi isidlali semidiya ukuze amakhasimende azi ukuthi imuphi umfanekiso okhethiwe. I-Plus multiview ifaka ngisho nesimo sokurekhoda, ukusakaza kanye ne-Fairlight audio mixer.
Ngomhlanganisi womsindo owakhelwe kuFairlight, i-ATEM Mini yenza kube nokwenzeka ukwenza ukuxuba komsindo okubukhoma okuyinkimbinkimbi. Isihlanganisi sangaphakathi sifaka inani leziteshi eziyi-12 ukuze amakhasimende akwazi ukuxuba umsindo kuyo yonke imithombo. Lokho kuwomsindo ovela kubo bonke I-HDMI imithombo nokufakwayo kwe-2 stereo mic. Isiteshi ngasinye sokufaka sibonisa i-EQ esezingeni eliphakeme kakhulu le-band ye-6 ne-compressor, i-limiter, i-expander kanye nesango lomsindo kanye ne-panning ephelele.
“Le modeli entsha ye-ATEM Mini ingukuqambeka kwangempela ekuhambeni komsebenzi. Ngokokuqala ngqa, ukukhiqizwa okubukhoma kuhlanganiswe ngokuphelele ekuhambeni kokuhlelwa kokukhiqizwa kokuthunyelwe. Akugcini lapho, kepha ngokuhlanganiswa kweBlackmagic RAW, singasebenzisa amafayela e-ISO aqoshwe kuswishi, noma amafayela aqoshwe kwikhamera. ” kusho uGrant Petty, I-Blackmagic Design Umphathi omkhulu. “Lokho kungukuhamba kwefilimu kweRAW, ukuhamba kokukhiqizwa kokuthunyelwe kanye nokuhamba komsebenzi wokukhiqiza bukhoma konke kuhlanganiswe ngokuphelele okokuqala! Cabanga ukwenza i I-Ultra HD faka umbala we-master graded master yonke kusuka kumanani aphansi amancane HD isishintshi. Kuyajabulisa impela futhi kuzokwenzela umkhakha wethelevishini ukuhamba konke okusha! ”
Izici ze-ATEM Mini Pro ISO
Ifaka umklamo osuselwa kupaneli elincane.
Yakhelwe ukusekela ukurekhoda okokufaka ngakunye njengefayela le-ISO elihlukile.
Ilondoloza ifayili leprojekthi le-DaVinci Resolve ngokuchofoza okukodwa kokukhiqizwa bukhoma.
Isekela ukuxhuma kufikela kumakhamera ama-4 noma amakhompyutha.
Ukusakaza bukhoma nge-Ethernet kusekelwa ku-ATEM Mini Pro.
Ukukhishwa kwe-USB kusebenza njengekhamera yewebhu futhi kusekela yonke isoftware yevidiyo.
Izindinganiso ezizenzakalelayo ziyaguqula futhi zivumelanise kabusha zonke I-HDMI okokufaka.
Kufaka phakathi i-ATEM Software Control yamahhala ye-Mac ne-Windows.
Imidiya yangaphakathi yemidwebo engama-20 ye-RGBA yezihloko, amapuleti okuvula namalogo.
Kufaka i-ATEM Advanced Chroma Key yomsebenzi oluhlaza / oluhlaza okwesibhakabhaka.
IMultiview ivumela ukuqapha kwawo wonke amakhamera ku-ATEM Mini Pro.
Isihlanganisi somsindo sisekela i-limiter, i-compressor, i-6 band EQ nokuningi!
I-ATEM Mini Pro ISO iyatholakala manje nge-US $ 895, ngaphandle kwemisebenzi yendawo nentela, kusuka I-Blackmagic Design abathengisi emhlabeni wonke.
Izithombe zomkhiqizo ze-ATEM Mini Pro ISO, nazo zonke ezinye I-Blackmagic Design imikhiqizo, iyatholakala ku www.blackmagicdesign.com/media/images.
Mayelana Blackmagic Design
I-Blackmagic Design idala imikhiqizo yokuhlela ividiyo yekhwalithi ephezulu kakhulu, amakhamera we-digital amafilimu, izilungisi zombala, abaguquli bevidiyo, ukuqapha kwevidiyo, ama-routers, abashintshi bokukhiqiza bukhoma, ama-recorder e-disk, abaqaphi be-waveform kanye nama-scanner yesikhathi sangempela sefilimu, i-post production kanye nezimboni zokusakaza ithelevishini. I-Blackmagic DesignAmakhadi wokuthwebula we-DeckLink wethule inguquko ekhwalithi kanye nasekuthengekeni ekukhiqizeni okuthunyelwe, ngenkathi umklomelo wenkampani u-Emmy ™ wokuwina imikhiqizo yokulungiswa kombala we-DaVinci ubusuphethe imboni yethelevishini neyamafilimu kusukela ngo-1984. I-Blackmagic Design iyaqhubeka nokuqalwa kwemishini kuhlanganise ne-6G-SDI kanye ne-12G-SDI imikhiqizo kanye ne-stereoscopic 3D futhi I-Ultra HD amafomu okusebenza. Eyasungulwa abahleli nabanjiniyela bokukhiqiza okuthunyelwe emhlabeni jikelele, I-Blackmagic Design unamahhovisi e-USA, UK, Japan, Singapore nase-Australia. Ukuze uthole olunye ulwazi, sicela uye ku www.blackmagicdesign.com.
Okuthunyelwe kwakamuva nge-Zazil Media (bona konke)
Isikole Sikazwelonke Sezamafilimu Nethelevishini Khetha u-EditShare ukuze Kuthuthukiswe Ingqalasizinda Emikhulu Yezindaba - Disemba 3, 2020
Izithombe zePace zisebenzisa iBlackmagic Design ku-Blur Line Phakathi Kokukhiqiza Nokuthunyelwe - Disemba 1, 2020
I-ATEM Constellation 8K ne-24 Micro Studio Camera 4Ks Isetshenziselwa Ikhonsathi Yokusakaza bukhoma ye-WANIMA - Novemba 30, 2020
Ngaphambilini: I-Bluefish444 ingeza ukusekelwa kwe-KRONOS K8 kwe-Foundry Nuke ne-Nuke Studio 12 eneWindows 2020.14.0 Faka Iphakheji
Olandelayo: Umklamo WeBlackmagic Umemezela iBhuloho elisha le-ATEM yokusakaza